Kibera: “Mpitarika Ara-politika No Ilain’i Kenya Fa Tsy Mpisera Zava-mahadomelina” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jona 2018 8:13 GMT
Ampahany amin'ireo andiana tatitra avy amin'ny fiaraha-miasan'i Global Voices amin'ny Map Kibera sy Map Mathare ity lahatsoratra ity, izay nitranga nandritra ny Fihaonambe nataon'ny Global Voices tao Nairobia tamin'ny volana Jolay 2012.
Tantara sy sary an'i Kevin Rennie
“Mila mpitarika i Kenyà fa tsy mpisera zava-mahadomelina”, hoy i Hamza Ahmed. Manampy izy amin'ny fandaminana an'ireo vehivavy mpifidy ao amin'ny distrika mahantra ao Kibera, Nairobia, izay marobe ireo olona no mitazona aina amin'ny fisakafoanana indray mandeha monja isanandro. Maherin'ny 170 000 ireo mponina ao ary 5 kilometatra monja miala an'i Nairobia renivohitr'i Kenyà no misy azy.
Nandritra ny fitsidihana tao amin'ny tetikasa Map Kibera, nanana tombony ny vondrona kely iray avy taminay avy amin'ny fihaonamben'ny Median'Olontsotra Global Voices 2012 tafahaona taminà olona roa teo an-toerana, izay miasa mba ho fahombiazana amin'ny lafiny rehetra ireo fifidianam-pirenena hatao amin'ny taona hoavy.
Sarintanin'i Kibera – sary an'ny OpenStreetMap (CC BY-SA)
Vehivavy matanjaka i Hamza, be herim-po ary vehivavy maharesy lahatra ao anatin'ny faha-enimpolo taonany mahery. Hitanay fa taona iray no nahaterahanay. Miaraka amin'i Tobias Omondi, izay mandamina ireo mpifidy manan-kilema, miasa izy mba hampitsaharana ny kolikoly politika. Araka ny voalazan'i Hamza, mankaleo azy ireo ireo mpilaza fanavaozana vonjimaika tsy anao afa-tsy ny mitsentsitra ny vahoakany. Manao fanamby amin'ireo izay mampanantena fiainana mendrika kokoa an'ireo mahantra izy, kanefa mampiasa azy ireny ho amin'ny tombontsoany manokana.
Ataony avokoa izay rehetra eo amin'ny fahefany mba hialàna amin'ny fiverimberenan'ny fandatsahan-drà nandritra ny krizy tamin'ny taona 2008 izay nanaraka ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2007. Melohiny ireo mpanao politika sy ireo namany tamin'ny fitarihana ny olona ho amin'ny fankahalànaa sy ny herisetra.
Nanaraka ny ohatra nasehon'ny mpitarika an'i Afrika Atsimo, manana toetsaina iray afaka ampiharina avy hatrany ho amin'ny fampihavanana i Hamza “Isika tsy afaka mamela heloka afa-tsy ireo izay manaiky fa nanao ny tsy mety”.
Tao amin'ny Mchanganyiko Hall izahay no nihaona, toerana izay misy ny sekoly eo an-toerana, ivontoerana ho an'ireo vehivavy, ary toeram-pivorian'ny vondrom-piarahamonina ho an'ireo hetsika toy ny fihaonamben'ireo kandidà. Vao haingana no notokanan'ny Praiminisitra Keniana, Raila Odinga, sy ny Ambasadaoro Frantsay izy, tamin'ny fiandohan'ny taona 2012.
Ivontoerana Mchangyiko, Kibera, Nairobi
Nozarain'i Tobias ireo hasosorany tamin'ny fiasana taminà tetikasa iray ho an'ny zon'ireo kilemaina. “Dimy isanjato amin'ireo asa ao amin'ny governemanta no natokana ho an'ireo kilemaina. Kanefa, ny ankamaroany tsy nahafeno ny fepetra akory, satria ny 90% dia tsy manana ny fahaizana fototra nahavita ny kilasy taona fahasivy akory (3 ème). ” Filàna maika ny fiofanana”.
i Steve Banner avy amin'ny Kibera News Network manazava ao anaty lahatsorany ao amin'ny blaogy hoe Ny fomba hahafahan'ny media an'ny olom-pirenena hanampy mba hiantohana fisianà fifidianana milamina ao Kenyà amin'ny taona 2012-13:
Ao anatin'ireo toeram-ponenana tsy ara-dalàna sy mahantra indrindra toa an'i Kibera, izay tonga amin'ny faratampony ny Herisetra aorian'ny Fifidianana, nanampy tamin'ny fanangonana sy fizaràna vaovao ny fitomboan'ny asa fanaovana gazetin'ny olom-pirenena. Araka izany, lasa fitaovana tena ilaina izy io mba hanaparitahana ny hafatra ho an'ny fandriampahalemana any anivon'ireo tanora, izay tena haza voalohany ho an'ireo mpanao politika amin'ny fanatanterahana zava-dratsy tsy mahomby sy herisetra any anaty vondrom-piarahamonina.
Afaka manaraka akaiky an'ireo fifidianana hatrany ampotony ihany koa ireo media an'ny olom-pirenena satria ao anaty vondrom-piarahamonina no misy ny fototr'izy ireo, mandray anjara ihany koa amin'ny fanentsenana ny tsy ampy amin'ny fahazoana vaovao izay mety nandray anjara tamin'ny fampaharetana ny herisetra taorian'ny fifidianana.
Izy ireo ihany koa no mikarakara ireo diabe ho an'ny fandriampahalemana ao Kibera izay manampy amin'ny fampitambarana ny vondrom-piarahamonina sy ireo mihevitra ny ho kandidà politika izay manao kabary manindrahindra ny fandriampahalemana sy ny firaisankina any anivon'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina.
Cyber Kafe ao Kibera
Ny lahatsoratr'i Steve no nahazo tamin'ny fifaninanana fanoratana bilaogy hahazoana vatsimpianarana nandritra ny Fihaonambe Global Voices tamin'ny taona 2012.
Ao Kibera, ny 15 hatramin'ny 35 taona no tena mampiasa ny aterineto. Na misy aza ny fidirana toa ireo cybercafés ao Kibera, ny fidirana amin'ny ankapobeny amin'ireo finday nahatonga ny fandefasana SMS ho fitaovana haingana indrindra amin'ny fiseraserana. Ny fotoana no hanambara raha toa afaka hiady amin'ny fihanaky ny honohono sy ny tahotra mandritra ny krizy izy io amin'ny hoavy.
Misy lahatsoratra mifandraika amin'izany ao amin'ny Rising Voices ary tatitra iray momba ny sehatrasa tamin'ny fihaonambe Ny Toerana Misy Ny Median'Olontsotra Ao Kenya.